यी पा’पी महिला ज’सले श्री’मानसँ’ग झ’ग’डा हु’दा गरिन, आ’फ्नै ३ स’न्तान को नि’र्म,म ह,त्या’ – AB Sansar
यी पा’पी महिला ज’सले श्री’मानसँ’ग झ’ग’डा हु’दा गरिन, आ’फ्नै ३ स’न्तान को नि’र्म,म ह,त्या’
October 18, 2020 adminLeaveaComment on यी पा’पी महिला ज’सले श्री’मानसँ’ग झ’ग’डा हु’दा गरिन, आ’फ्नै ३ स’न्तान को नि’र्म,म ह,त्या’
काठमाडौँ – अष्ट्रियामा एक नेपाली महिलाले आफ्नै तीन सन्तानको ह,त्या गरे पछि विदेशमा बस्ने नेपाली समुदाय स्तव्ध छ। अष्ट्रियाबाट प्रकाशन हुने क्रोने अनलाइनले ३१ वर्षिया एक नेपाली महिलाले आफ्नै अपार्टमेन्टमा तीन बच्चाहरुको ह,त्या गरेको समाचार सार्वजनिक गरे पछि विश्वभर सनसनि फैलिएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ अष्ट्रियाको उच्चस्रोतका अनुसार ह,त्याको अभियोग लागेकी बुटवल घर भएकी ३१ वर्षिया चन्द्रा भट्टराई अर्याल हुन्। ****थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’,*****
स्रोतका अनुसार अर्याल दम्पतीमा लामो समयदेखि पारिवारीक स,मस्या थियो। उनीहरुको परिवार गुल्मीबाट वुटवल सरेको थियो। उनीहरुको बीचको झग,डाको बारेमा स्थानीय प्रहरी समेत जानकार थियो। प्रहरीले उनका श्रीमान अर्याललाई १५ किलोमिटरको दुरी भन्दा नजिक आउन नपाउने गरि प्रतिवन्ध लगाएको थियो। उनकी छोरीहरु गैरआवासीय नेपाली संघ लगायतका सामाजिक संघसँस्थाहरुको सांस्कृतिक कार्यक्रममा समेत सकृय सहभागी हुँदै आएका थिए।
ति महिलाले दुई छोरी र एक छोराको ह,त्या च,क्कु प्र,हार गरेर ह,त्या गरे पछि आ,त्मह,त्याको प्रयास गरेकी थिइन्। प्रहरीका अनुसार मृतक मध्य ८ महिनाको छोरा र नौं र तीन वर्षिया छोरीहरु रहेको बताएको छ। प्रह,रीले अर्याललाई अनुस,न्धानको लागि हिरासतमा लिएको छ। उनीको शनिवार साँझ मेन्टलहेल्थ लगायतको स्वास्थ्य प,रीक्षण गरिएको बुझिएको छ। नागरिकन्युजबाट
दशै-तिहारको मुखैमा ह्वात्तै घट्यो सुनको मुल्य, हेर्नुहोस आज कति पुग्यो !
कस्ति नि’र्द’यी आमा जस्ले गरिन आफ्नै तीन सन्तानको ह’त्या !
धनगढीमा अक्सिजनको कालोबजारी बढ्यो, अमित ड्रग्स हाउसले ६५० थान सिलिण्डर लुकाइएको फेला
गौरीगंगामा किसानको केराबारीमै बाघ:विहानैदेखि गर्जिन थाल्यो